Izicelo ezi-3 zokucwangcisa umsebenzi wakho | IBezzia
UMaria vazquez | 13/10/2021 10:00 | Umfazi ophetheyo
Nokuba usebenza ngaphandle kwekhaya ngokungathi usebenza ngefowuni Siqinisekile ukuba uyakuxabisa ukwazi izicelo esizicebisayo namhlanje zokucwangcisa umsebenzi wakho. Kwaye kunjalo mininzi imisebenzi esihlala kuyo mihla le Kwaye asisoloko sisixhobo esifanelekileyo sokwenza oko.
Ukulungiselela imisebenzi yemihla ngemihla, ukulawula iiprojekthi kunye nokwabela abaphantsi amagunya omsebenzi ngokwabelana ngemisebenzi nabanye oogxa bakho yinto eya kuba lula kuwe ngeizicelo zokucwangcisa umsebenzi wakho sithetha nawe namhlanje. Ungazifaka nakwiselfowuni yakho, ikhompyuter yakho kunye ne-iPad yakho, ukuze ufumane intuthuzelo enkulu. Bafumanise!
Todoist ngu isixhobo sokulawula umsebenzi Ngoyilo olulula olukunceda ukuba uphinde ufumane ukucaca kunye noxolo lwengqondo ngokuthatha yonke imisebenzi entlokweni yakho ukuze uyibeke kuluhlu nokuba uphi okanye usebenzisa siphi isixhobo.
Le yikhalenda epheleleyo, uluhlu lwemisebenzi kunye nenqaku lesicelo esikunika izixhobo ezingapheliyo zokucwangcisa imisebenzi kunye nemisebenzi. Ungazihlela ngeeprojekthi, iilebheli kunye namanqanaba aphambili, kunye nokubanika umhla omiselweyo okanye amaxesha ngamaxesha ukuba bayaphindaphinda imisebenzi. Ke uya kuba nombono ocacileyo wayo yonke into ekufuneka uyenzile ngamaxesha onke kwaye awusoze ulahlekelwe ngumkhondo weyona misebenzi ibaluleke kakhulu.
Ngale nsiza unokwenza lula indlela yokusebenza yakho ukunxibelelana neefayile zakho, i-imeyile kunye nekhalenda. Le app ikunceda ulawule iiprojekthi ezinkulu ngokukuvumela ukuba wahlule kwaye unike imisebenzi kwamanye amalungu eqela. Yahlulahlula kwaye woyise imisebenzi yakho yemihla ngemihla kwiiprojekthi ekwabelwana ngazo!
Uninzi lwezi zinto zifumaneka simahla, kodwa ungafumana ezinye eziluncedo urhuma kwiakhawunti Pro (€ 3 / ngenyanga) okanye ishishini lamaqela (€ 5 / ngenyanga). Ezi zikunikezela kwiifilitha zesiko ukuya kwiitemplate zeprojekthi kunye neenkcukacha zokuvelisa, phakathi kwezinye izinto.
Intuitive kwaye intofontofo, u-Evernote uya kukunceda ulawule kwaye uququzelele imisebenzi yakho. Ngalesi sixhobo unokwenza uluhlu lwezinto oza kuzenza, ucwangcise ukutyunjwa kwikhalenda, iqela kunye nokuthatha izimvo kwiifomathi ezahlukeneyo kwaye faka amaxwebhu ekhompyuter ngekhamera kwifowuni yakho ephathekayo.
Ukwenza ukuba usetyenziso lusebenzele ngakumbi kuwe, unga Qhagamshela iakhawunti efanayo ye-Evernote kwizixhobo zakho ezahlukeneyo: iselfowuni, ikhompyuter kunye nethebhulethi. Ngale ndlela uya kuhlala ugcina ulwazi olubalulekileyo ezandleni zakho: amanqaku akho avumelaniswa ngokuzenzekelayo kuzo zonke izixhobo zakho. Amanqaku, ngendlela, onokongeza ngayo isicatshulwa, imifanekiso, iaudiyo, iskena, iifayile zePDF kunye namaxwebhu.
Yenza kwaye unike imisebenzi ngaphakathi kwamanqaku akho nge imihla emiselweyo, izaziso kunye nezikhumbuzo ukuze kungabikho nto ikusabayo kwaye yonyuse imveliso yakho! Ungayenza ngesicwangciso sayo sasimahla okanye usebenzise isicwangciso sayo soBuntu okanye sokukhetha, nge- € 6,99 kunye ne- € 8,99 ngenyanga, ngokwahlukeneyo.
I-Trello sisicelo samagqala solawulo lweprojekthi esiye safumana ukufaneleka njengokwenza ngocingo ngocingo. Izintlu kunye namakhadi ziintsika zombutho apho iibhodi zesi sicelo zisekwe khona.
Nika imisebenzi, setha ixesha elibekiweyo, jonga imveliso, usete iikhalenda nokunye okuninzi ukubona ukuhamba komsebenzi okuphuculweyo. Amakhadi eTrello ayafana nombutho, njengoko evumela ukulawula, ukubeka iliso nokwabelana ngemisebenzi ukususela ekuqaleni kuye esiphelweni. Vula naliphi na ikhadi ukuze ufumane i-ecosystem yoluhlu lokutshekisha, imihla ebekiweyo, izinamathiselo, iincoko kunye nokunye okuninzi.
Nangona u-Trello ungumququzeleli olungeleleneyo, usetyenziswa kakuhle ngokusebenza njengeqela. Jonga imisebenzi yeqela lakho Ukusebenza kunye nokukwazi ukubona ukuba amakhadi ahamba njani phakathi kwamalungu ahlukeneyo ade agqitywe yinto onokuyenza nakwiakhawunti yakho yasimahla. Kodwa ukuba ufuna ngaphezulu, unokuqesha isicwangciso sabo sePremiyamu, efanelekileyo kumaqela ukuya kuthi ga kubantu abayi-100 ekufuneka bejongile iiprojekthi ezininzi.
Nokuba usebenzela omnye umntu e-ofisini okanye ekhaya, ngokungathi uyasebenza okanye usebenza yedwa. Ezi zicelo zokucwangcisa umsebenzi wakho zinokuququzelela usuku lwakho nosuku. Kwaye zonke zinomdla kakhulu, zinike ithuba!
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Umfazi ophetheyo » Ii -apps ezi-3 zokucwangcisa umsebenzi wakho